Salaadiinta Bariga Burco Oo Dib U Dhigtay Shirkii Beelaha Garxajis
Salaadiinta Bariga Burco Oo Dib U Dhigtay Shirkii Beelaha Garxajis
Saturday September 21, 2019 - 20:08:53 in
Madaxda dhaqanka ee beelaha bariga Burco ayaa ku dhawaaqay in dib loo dhigay shirkii la qoondeeyay inuu u furmo beelaha Habar jeclo iyo Garxajis.
Salaadiintan ayaan mudayn wakhti cusub oo uu shirku furmi doono waxase ay sheegeen inaanu shirkaas baaqan. Suldaan Maxamuud Guuleed oo ugu horayn shirkaas ka hadlay ayaa yidhi "Waxa jiray shir loo balansanaa oo gogoshiisa beelaha habar jeclo ay dhigeen oo mar hore baaqday sababtuu u baaqdayna ahayd saddex arrin oo kala ahaa xilligii xajka oo uu ku soo beegmay, shaqaaqadii ka dhacday banka iyo arrintii jabhadda caare oo qolada garxajis oo ah beesha aanu gogosha u dhignay oo iyaguna hawshaas caare u baxay.”
Suldaan Maxamuud wuxuu intaas raaciyay "Waxay noqotay dhibaatadii way sii badatay waxa lama huraan noqotay maadaama dhibaatadii markii horeba shirku u baaqday taagantahay in shirkii dib loo dhigo, waxaanu halkan ka soo jeedinaynaa in shirkaas dib loo dhigayo oo loo baxayo sidii gobalkaas Sanaag nabad loogu soo dabaali laha.”
Suldaan Maxamuud Xaaji Xuseen ayaa isna yidhi "Dib u dhacaas ayaa jira oo hawlahaas inagu soo kordhay ee shaqaaqooyinka ah ayaa jira marka ugu horaysa ee hawlahaas aynu cagaha u dhigno ayuun buu shirkiina ku xigi doonaa oo loogu diyaar garoobayaa shir la laalay iyo shir oodmay midna ma jiro, xukuumadda waxaynu leenahay hawlo badan ayaa yaala qaababkii looga bixi lahaa ee la iskaga iman lahaa ee idinkuna awalba waa loo horayee ugu huri lahaydeen wixii la idiinka baahnaa u diyaar garooba.”
Salaadiinta ayaa waxa kale oo ay baaqyo nabadeed u direen bulshada deegaanada Ceel-afweyn.
War Muhiim Ah:Waxaa Lasoo Helay Filmkii Sayidka Ee Lawaayay...
Copyright © 2013 - 2020 Batalaale News All Rights Reserved.